> Resource > Hard Drive > Sida loo cesho ah Hard Drive
Maxaad u baahan tahay inaad si buuxda u masixi drive adag?
Mararka qaarkood si fudud la tirtiro files ma wanaagsana ku filan, maxaa yeelay, waxaynu og nahay in files tirtiray ama formatted weli ka jiraan meel on disk adag. Sidaas:
• Marka aad qorshaynaysid in aad nadiifiso ah drive jir adag gabi ahaanba, Tirtirin qoto dheer noqon karaan hab fiican oo in ay soomaan wadid aad u adag.
• Marka aad go'aansato in aad ku deeqdo ama your computer jir tuur oo aadan rabin in macluumaadkaaga shakhsiyeed xaday, Tirtirin qoto dheer hortagi karaa xogta iyo faylasha aad ka soo kabsaday by qalab kabashada xogta.
• Marka la doonayo in aad dib aad Windows, Tirtirin qoto dheer aad ku noqon karto drive cusub oo ku siin bilow cusub.
Sida loo tirtiri drive adag?
Inta badan marka aan tirtiri disk adag, waxaan rabnaa in aan ilaaliyo macluumaadka shakhsiyeed kaydiyaa it on ka -sababtu. Laakiin tirka iyo formatting kuma filna, ficilka ee tirtiro file a ma saaro qalab lagu kaydiyo ah. Si loo ilaaliyo nafteena, waxaynu u isticmaali kartaa Wiper disk ah inay tan sameeyaan noo, sida Wondershare LiveBoot Boot CD , taas oo naga caawin karaan si ay u tirtiri disk oo dhan ama xijaab hal sida ay baahida loo qabo.
Step1. Computer Boot ka LiveBoot
Geli Liveboot CD si aad u computer CD-ROM ama furaysto ee USB LiveBoot iyo bilowdo your computer, ka dibna waxay doortaan in ay u Boot ka LiveBoot.
Step2. Ha ogolaan in xogta
LiveBoot Daahfurka on your computer, u tag "Management Disk" menu dusheeda, oo ku dhacay "Ha ogolaan in Data" liiska bidix. Waxaa jira laba hab oo aad u, ah Barzakh, Wiper iyo digsi Wiper.
Barzakh Wiper: Ha ogolaan in xijaab gaar ah oo nadiif ah loo soo dajiyo of software ama Windows. Wiper Disk: masixi dhan disk adag tahay si ammaan ah u qubaan.
Dooro mid ka mid ah si ay u daboolaan baahida aad u gaar ah. Ama iyaga ka mid ah oo aad qaadataa oo keliya 1 click si buuxda u masixi Risaalo ama disk. Marka u dhammeeyey, qaado oo ka mid ah CD LiveBoot iyo reboot your computer, waxaad ka heli doontaa in aad xijaab ama disk waa mid aad u nadiif ah, mana jirto wax qalab kabashada iyaga ka heli kartaa dib.
Repair Disk Software: Dayactir Hard Disk & Hel Data Back
Siduu u Hard Disk Bioscience la Disk Tool Hubinta
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka cajaladaha HP Hard